နားစွန်နားဖျား ရပ်ကွက်…။ (March’ 2015) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Arts & Humanities » နားစွန်နားဖျား ရပ်ကွက်…။ (March’ 2015)	52
နားစွန်နားဖျား ရပ်ကွက်…။ (March’ 2015)
Posted by black chaw on Mar 5, 2015 in Arts & Humanities, Celebrity, Creative Writing, Entertainment, Members, Movies/TV, Music, Myanmar Gazette, News, Society & Lifestyle, Thakhin: CJ Only | 52 comments
ဒီလအတွင်း အနုပညာ သတင်းတွေ ကို နိုင်ငံရေးသတင်းတွေက
ကျောင်းသားသပိတ်…၊ အလုပ်သမားသပိတ်…၊ စသည်ဖြင့်…။
အခုလောလောဆယ်တောင် ကျောင်းသားသပိတ်ဆက်လက် ဆင်နွှဲသင့်တယ် မသင့်ဘူးနဲ့
အဲ့လို နိုင်ငံရေးသတင်း ဆူနာမီကြီးတွေ ကြားထဲက ဂျာနယ်စာမျက်နှာများပေါ် ထိုးဖေါက်ရောက်ရှိလာတဲ့
အနုပညာ သတင်းအတိုအထွာလေးတွေကို ဖေါက်သည်ချရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်…..။
ဒါရိုက်တာ မောင်မျိုးမင်း ရဲ့ ရင်တွင်းဖြစ် လို့ ဆိုတဲ့ နှင်းဆီ အငြိမ့်ပေါ့ခင်ဗျာ…။
လူပျက်မင်းသားလေးတွေခင်ဗျာလည်း ဗိုလ်ချုပ်ဂုဏ်ပြုအငြိမ့်မို့ အောက်ပိုင်းပျက်လုံးတွေ
မပျက်ကြဖို့ ကြိုကြိုတင်တင် အချင်းချင်း သတိပေးကြရှာပါတယ်…။
ဒါပေမယ့် ပျက်လုံး ရှား တယ်ထင်ပါရဲ့…။
ပျက်လုံးတွေက တင်ပါးနဲ့ ရင်သား အထူးပြုပျက်လုံးတွေ ဖြစ်ခဲ့ရပေါ့…။
ဘီအီးဒီ အောင်သိုက်ပြောတဲ့ မရယ်ရတဲ့အပြင် ရယ်တောင်ရယ်ရသေးတယ် ဆိုတဲ့
ဖူးစုံရဲ့ ရင်သားကြီးတွေ ကလည်း ရယ်ရတယ်ခင်ဗျ…။
အိချောပို ရဲ့ တင်ပါးကြီးတွေကလည်း ရယ်ရတယ်ခင်ဗျ…။
ဟုတ်ကဲ့ သူတို့က အဲဒါကြီးတွေနဲ့ ပျက်လုံးထုတ်တော့ ကျွန်တော်တို့ကလည်း
အဲဒါကြီးတွေကို ကြည့်ကြည့်ပြီး ရယ်ကြရတာပေါ့ခင်ဗျာ..။
အိချောပို ကလည်း အိချောပိုပါပဲ ခင်ဗျာ…။
အဆင့်အတန်းရှိတဲ့ ပျက်လုံးလေးတွေလည်း ပါခဲ့ပါတယ် ကျောင်းဒကာ…။
ဂီတစာဆိုလေး လွှမ်းပိုင် ရဲ့ မင်းရဲကျော်စွာဗိုလ်နေတိုး သီချင်းကိုဖျက်ပြီး
ကဏ္ဍစုံ ပျက်လုံးထုတ်သွားတာလေးကို အကြိုက်ဆုံးပါပဲခင်ဗျာ…။
အကယ်ဒမီ မရခဲ့တဲ့ နေတိုးကိုယ်တိုင် အကယ်ဒမီကို လှောင်ပြောင်သရော်သွားတာခင်ဗျ…။
နှစ်တစ်ရာပြည့် ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ ဂုဏ်ပြု အငြိမ့် ဆိုတာလေးကို ဖယ်လိုက်ရင်
နောက်ဆက်တွဲသတင်းအနေနဲ့ ကွမ်းလုံရက် ၄၀ ဆိုတာကို ကွန်ဒုံး ရက် ၄၀ လို့
ပျက်မိရှာတဲ့ လူရွှင်တော်လေး အကယ်ဒမီမင်းမော်ကွန်း ခင်ဗျာ
တားတား စစ်တပ်ကို အမြင်မကြည်ဘူးဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး…၊
တားတား အဘိုးကလည်း စစ်သားပါ…။
တားတား အဖေကလည်း စစ်သား…တော့ မဟုတ်ပေမယ့် စစ်သား ဖြစ်ချင်ခဲ့သူပါ…၊
တားတား အနေနဲ့လည်း တစ်ချိန်မှာ စစ်မှု မထမ်းမနေရ ဥပဒေ အသက်ဝင်လာခဲ့ရင်
စသည်ဖြင့် တောင်းပန်စကားတွေ အထပ်ထပ် ချွေနေရတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း။
မင်းမော်ကွန်းလေးက တောင်းပန်စကားပြောတာတောင် ရယ်ရတယ်ခင်ဗျ…။
အဖေက စစ်သားတော့မဟုတ်ပေမယ့် စစ်သားဖြစ်ချင်ခဲ့သူပါ…တဲ့…။
ဇာဇာထက် ရဲ့ နိုင်ငံရေး
ဆက်စီမော်ဒယ်အဖြစ် နာမည်ကြီးတဲ့ ဇာဇာထက် က ကျဆုံးတပ်မတော်သားတွေအတွက်
ပြီးတော့ ကျဆုံးစစ်သည်တွေကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ စစ်ဝတ်စုံနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး
တစ်ပတ်လုံး Facebook ပေါ်တင်သွားပေးဦးမှာပါတဲ့…။
ဆက်စီမော်ဒယ်လည်း နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးကို ချစ်တာပဲ
ဆိုသည့် စကားလေးကလည်း အလွန်လှပခဲ့ပါသည်ပေါ့ခင်ဗျာ…။
၀မ်းသာရမလို…၊ ၀မ်းနည်းရမလို ဖြစ်ရတဲ့ သတင်းလေးတစ်ပုဒ်ကတော့
ဇာဇာထက်တစ်ယောက် အဖေါ်အချွတ် ပုံတွေ ရိုက်တာကို လျှော့ချသွားတော့မယ်လို့ ဆိုပါတယ်…။
ဇာတို့ လုပ်ခဲ့ပြီးသွားပြီ…၊ ထပ်ပြီးတော့ မလုပ်ချင်တော့ဘူး…၊ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့
လုပ်တာလည်း အရမ်းများနေပြီ…၊ နောက်ဆုံး လုံးဝ ချွတ်ရိုက်မှပဲ ရတော့မှာလေ…၊
လူတွေကလည်း မပေါ့်တပေါ် ဖီလင်ကိုပဲ ကြည့်ချင်ကြတာ…၊ အရမ်းပြတာကိုလည်း မကြည့်ချင်ကြဘူးလေ…၊
လို့ ဇာဇာထက် က ပြောသွားပါတယ်ဗျာ…။
ကဲ…ဆက်စီမော်ဒယ်လေးကတောင် နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးကို ချစ်ပြသွားပြီ…။
ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့ကလည်း နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးကို ချစ်ပြလိုက်ကြပါစို့…။
၀ိုင်း ရဲ့ ဟောကိန်း…။
ဒိုးကနဲ ဒေါက်ကနဲ စကားလုံးမြားတွေ ပြစ်လွှတ်တတ်တဲ့ ၀ိုင်း တစ်ယောက်
အကယ်ဒမီရသွားပြီနောက် အနည်းငယ် အသံတိတ်သွားပါတယ်…။
အထူးသဖြင့် ဒီနှစ် မချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အကယ်ဒမီဆုတွေအတွက်
၀ိုင်းဆီက လုံးဝအသံတိတ်သလို ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်…။
အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ၀ိုင်း ရဲ့ အဆိုက ဒီလိုပါ…။
လူပိန်းတွေကတော့ ၀ိုင်းဆုရလို့ ပါးစပ်ပိတ်သွားတယ်လို့ တွေးကြမှာပေါ့။ ပွဲပြီးသွားမှ ထပြီးကန့်ကွက်တဲ့အလုပ် မလုပ်နဲ့။
ပွဲမစခင်ကတည်းက မတရားဘူးထင်တဲ့ အချက်တွေကိုပြော။
သူတို့ မတရားခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာ ၀ိုင်းလောက် မဆိုးသေးပါဘူး။
လို့ အိုအေစစ်ဂျာနယ်ကို ပြောသွားခဲ့ပါတယ်ဗျာ…။
မြန်မာ့ရုပ်ရှင်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြတ်သားတဲ့ အမြင်တစ်ခုကိုလည်း ဟောကိန်းထုတ်သွားပြန်ပါတယ်။
မြန်မာ့ရုပ်ရှင် အဆင့်အတန်းသည် အခု ရိုက်နေကြတဲ့ ရိုက်ကူးရေးပုံစံအတိုင်း လက်ရှိ ရှိနေတဲ့ အဆင့်အတန်းအတိုင်း
ဆက်သွားမယ်ဆိုရင် ၂၀၁၆ မှာ ရုပ်ရှင်လောက ကျဆင်းသွားနိုင်တယ်
လို့ ဒါရိုက်တာ ၀ိုင်းက နံနက်ခင်း ဂျာနယ်ကို ပြောသွားခဲ့ပါတယ်ဗျာ။
ချစ်ကောင်း + အိမ့်ချစ် ရှိုးပွဲကြီး
အချိန်ရေစီးကြောင်းကတော့ တစ်သွင်သွင် စီးနေပါတယ်ခင်ဗျာ…။
ရော့ခ်ကဗျာတွေကို အတွဲလိုက်သီဆို အောင်မြင်ခဲ့သော
ရော့ကာကြီး ချစ်ကောင်း ရဲ့ သမီး အိမ့်ချစ် တောင် အောင်မြင်တဲ့
ချစ်ကောင်းမှသည် အိမ့်ချစ်ဆီသို့ပေါ့ ကျောင်းဒကာ…။
အခုလာမယ့် မေလ ၉ ရက်နေ့မှာ ချစ်ကောင်း-အိမ့်ချစ် သားအဖ ၂ယောက် အတူတွဲလို့
ချစ်ကောင်းသမီး အိမ့်ချစ် ကနေ အိမ့်ချစ် အဖေ ချစ်ကောင်း ဆိုတဲ့ ပြောင်းလဲလာမှုအပေါ်
လို့ နံနက်ခင်း ဂျာနယ်က အိမ့်ချစ် ကို မေးပါတယ်…။
ချစ်ကောင်းသမီး အိမ့်ချစ် အနေအထားမှာ သမီးဘက်က အင်အား အရမ်းကို နည်းနေပါသေးတယ်။
ချစ်ကောင်းလို ဖြစ်ဖို့ကတော့ အိမ့်ချစ် အနေနဲ့ အတော်ကြီး ကြိုးစားရဦးမယ်လို့
နီနီခင်ဇော် ရဲ့ ဂယ်ဘဲ ဂယ်ဘဲ
ခေတ်ကတော့ နီနီ့ ခေတ်လို့ကို ပြောရတော့မယ့် အပေါက်မျိုးကြီးပေါ့ ကျောင်းဒကာ…။
ပီသကြည်မြ တဲ့ အသံ…၊ သားကောင်းမိခင် ပီသတဲ့ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် နဲ့
စွဲဆောင်နိုင်စွမ်း မြင့်မားတဲ့ ၀တ်စားဆင်ယင်ပုံတွေကြောင့်
အစ်ကိုကာလသားတွေ ရင်ထဲမှာ နေရာတစ်နေရာ အခိုင်အမာ ရရှိထားခဲ့ပြီလို့
ပြီးခဲ့တဲ့ ဂီတဆုပေးပွဲမှာလည်း ဆုတွေ ဆွတ်ခူးပြီး ဂီတ အရည်အသွေး ကို မှတ်ကျောက်တင်
နားစွန်နားဖျား ကြားရတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ် အရတော့ နီနီခင်ဇော် ဟာ
မိန်းကလေး အဆိုရှင်တွေထဲ ဆိုကြေးအမြင့်ဆုံး လို့ ဆိုနေပါတယ်ခင်ဗျာ…။
သူ့ခေတ် သူ့အချိန်ဆိုတော့လည်း ဘာလုပ်လုပ်တင့်တယ်နေတော့တာ ခင်ဗျ…။
အခုလည်း ဂယ်ဘဲဂယ်ဘဲ အမည်ရ သီချင်းတစ်ပုဒ်တည်းကို DVD တစ်ချပ် ၆၀၀ ကျပ်နဲ့
နီနီခင်ဇော်သာ ဖြစ်ပလေ့စေ…၊ ၆၀၀ မဟုတ်ဘူး ၆၀၀၀ ဆိုလည်း အားပေးမယ်ဆိုတဲ့
ကျောင်းဒကာ ကိုကို မမ များအတွက် သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်ပေါ့ခင်ဗျာ…။
တစ်သက်တာ ထူးချွန်ဆုရတဲ့ ဇာလျန်း
မြန်မာ့ဂီတ ထူးချွန်ဆု ပေးပွဲ ၂၀၁၄ မှာ တစ်သက်တာ ဂီတ ဆုရှင် အဖြစ်
Bass ဂစ်တာသမားကြီး ကိုဇာလျန်း ကို
ရွေးချယ် ချီးမြှင့်လိုက်တဲ့ သတင်းလေး ထည့်ပြောခဲ့ချင်ပါသေးတယ်…။
ဆုအဖြစ် ကျပ်ငွေ သိန်း ၅၀ နဲ့ ဆုအရုပ်လေး တစ်ရုပ်ချီးမြှင့်ပါတယ်…။
ကျပ်ငွေ သိန်း ၅၀ ဟာ များတယ်လို့ မဆိုနိုင်ပေမယ့် နည်းတယ်လို့လည်း
အင်မတန်သင့်လျော်သော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုအဖြစ် ထောက်ခံလိုက်ရပါတယ်…။
ကိုဇာလျန်းက သီချင်းလည်း ရေးပါတယ်…။
ကိုဇာလျန်း ရေးတဲ့ သီချင်းလေး ၂ ပုဒ်ကို ကျွန်တော် အခုထိ မှတ်မှတ်ရရ ရှိနေပါတယ်…။
မကောင်းလည်းကိုယ် ကောင်းလည်းကိုယ် စီးရီးထဲက လိုရင်အကုန်လုံးယူ သီချင်းနဲ့
အကုန်ရရင် ရ သီချင်းပါ…။
အဲဒီ သီချင်း ၂ ပုဒ်ကို နားထောင်လိုက်တာ နဲ့ ကိုဇာလျန်းကြီးဟာ အတော် စိတ်ကြီးပုံရပါတယ်…။
လိုရင် အကုန်လုံး ယူ ရယ်လို့ ချစ်သူကို ရက်ရောတတ်သလို
အကုန်ရရင်ရ မရရင် ဘာမှ မလိုချင်ဘူးရယ်လို့လည်း ချစ်သူကို စကားနာထိုးတတ်တယ်ခင်ဗျ…။
စစ်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ကလည်း ကိုဇာလျန်းလက်ရာလို့ ထင်ပါတယ်…။
ဆိုတော့ ကိုဇာလျန်း တစ်ယောက် တစ်သက်တာ ဂီတထူးချွန်ဆု ဆွတ်ခူးသွားတဲ့ အပေါ်
လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ၀မ်းသာဂုဏ်ယူပါတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း…။
Miss Asia Pacific World 2014 ဆုရှင် မေမြနိုးလေးနဲ့ အဆိုတော် အစ္စဏီ တို့
ချစ်သူတွေ ဖြစ်နေကြပြီဆိုလား နားစွန်နားဖျားရပ်ကွက်ထဲ သတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်လို့
မေမြတ်နိုးလေး ဘက်ကတော့ မဟုတ်ပါဘူးလို့ ငြင်းနေတာပါပဲ ခင်ဗျာ…။
ဘလက်ချောကြီးကလည်း မဟုတ်ပါစေနဲ့ လို့ပဲ ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ဗျာ…။
မြန်မာပြည်ဖွား…၊ ဘောလိဝုဒ်သရုပ်ဆောင်…မင်းသမီး လိုင်လာခန်း တစ်ယောက်
သတို့သားက မြန်မာပြည်က မဟုတ်ပါဘူးတဲ့…။
ဘောလိဝုဒ် မင်းသားလည်း မဟုတ်ပါဘူးတဲ့…။
မလေးရှားမှာ ကျောင်းတက်တုန်းက တွေ့ခဲ့တဲ့ သူပါတဲ့…။
ရွာနားကမျက် ရွာနွားမစား ဆိုတဲ့ စကားပုံကလည်း အထင်အရှားရှိနေမှကိုး…။
လူပျိုဟောင်းလေး မောင်ကိုင်ဇာ တစ်ယောက် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့မှာ
အသက် ၅၄ နှစ် ပြည့်ခဲ့ပါပြီတဲ့…။
သူ့ရဲ့ ဖော့ကန် နေအိမ်မှာ မွေးနေ့ အတွက်
၀က်သား အချိန် ၆၀၊ ငပိကြော်၊ သီးစုံပဲကုလားဟင်းတို့နဲ့ စတုဒီသာ ထမင်း ကျွေးခဲ့ပါသတဲ့…။
သာဓု…၊ သာဓု…၊ သာဓု…ပါဗျာ…။
သုံးထပ်ကွမ်း အကယ်ဒမီ ပြေတီဦး တစ်ယောက် ဒီနှစ်ရတဲ့ အကယ်ဒမီ ရွှေကြယ်ကို
ဒါရိုက်တာ ၀ိုင်း သို့ ကန်တော့မယ်ရယ်လို့ ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ…။
အဆိုတော် စိုင်းလွှမ်း…၊ ဇနီး အကယ်ဒမီ ထက်ထက် မိုးဦး နဲ့ သမီး စစ်လွန်းဝတီထက် တို့မိသားစု ဟာ
လောက်ကိုင်ဒေသ စစ်ပွဲအတွင်း ဒဏ်ရာရ စစ်သည် ရဲဘော်တွေအတွက်
ပြင်ဦးလွင် စစ်ဆေးရုံမှာ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သွားရောက်လှူဒါန်းကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ…။
ဗိုလ်ချုပ်ရာပြည့်အထိမ်းအမှတ် နှင်းဆီအငြိမ့်ပွဲမှာ မင်းရဲကျော်စွာ ဗိုလ်နေတိုး သီချင်းကို
ပျက်လုံးထုတ်တဲ့နေရာမှာ ယူသုံးခဲ့တဲ့ အတွက် သီချင်းပိုင်ရှင် လွှမ်းပိုင် က
ပီတိ ဖြပ်ဂုဏ်ယူနေပါတယ်လို့ ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားသွားပါတယ်…။
ကြည့်လည်း ဂုဏ်ယူဦး လွှမ်းပိုင်ရေ…။ ကွမ်ဒုံး ရက် ၄၀ အမှုတွဲထဲပါနေ ဦးမယ်ဟ…။
Example ထွန်းထွန်း တစ်ယောက် နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင် မလေး တစ်ယောက်နဲ့
ချစ်သူဖြစ်နေတယ်ရယ်လို့ နားစွန်နားဖျားရပ်ကွက်ထဲ သတင်းဖြစ်လို့ နေပါသတဲ့ဗျာ…။
အသက်ပဲ ၃၀ ရှိနေပြီ…၊ ချစ်သူရှိတာ ဘာဆန်းသလဲဗျာ…နော့်…။
အကယ်ဒမီ ဗန်းကိုင် တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့တဲ့ မော်ဒယ်သရုပ်ဆောင်သွန်းဆက် က
သွန်းဆက်ကို ပရိုပို့စ် လုပ်တဲ့သူတွေ ရှိပါတယ်…။ အဲဒီထဲက ရွေးရခက်နေတာပါ
ဒါလေးများ…၊ ဒါလေးများ…၊ လာပြီးပြောနေရတယ်…ဟယ်။
ပူပူနွေးနွေး အကယ်ဒမီ ဆုရှင် ၀တ်မှုံရွှေရည် က
ကြုံတွေ့ရတဲ့သူတွေကြောင့် အချစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရင့်ကျက်သွားပါပြီ
ဘယ်လို သင်ခန်းစာတွေကို သင်ယူခဲ့ရတယ် မသိ…။
ပူပူနွေးနွေး အကယ်ဒမီ ဆုရှင် မင်းဦး က မခိုင်ဝေသူ အမည်ရတဲ့ အမျိုးသမီးလေးနဲ့
၂၀၁၅ ခုနှစ် အတွင်းမှာပဲ လက်ထပ်ကြတော့မယ်လို့ ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားလာပါတယ်…။
ပြီးတော့ ကိုမင်းဦးက အကယ်ဒမီ ရသွားပေမယ့်
အနုပညာကြေးကတော့ အရင်အတိုင်းပါပဲလို့ ဖွင့်ဟပြောကြားပါတယ်…။
မင်းဦး နဲ့ ရုပ်ရှင်ရိုက်ချင်သူတွေ အတွက် သတင်းကောင်းပေါ့ဗျာ…။
ဒေါက်တာ ဖြူဖြူကျော်သိန်း တစ်ယောက် သူမရဲ့ မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့မှာ
သူမရဲ့ ငါးခွေမြောက် နာမည်ကျန်နေရစ်မယ် ဆိုတဲ့ စီးရီးကို ဖြန့်ချိပေးသွားမယ်လို့
သရုပ်ဆောင် အဆိုတော် ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း ရဲ့ ခါချနေရတယ် ဆိုတဲ့ တေးစီးရီးဟာ
အရောင်းဆိုင်တွေမှာ အခွေတွေ ပြတ်ကုန်တဲ့အထိ ရောင်းအားကောင်းခဲ့တယ်လို့
ဆယ်ကျော်သက်တွေ ကြားမှာလည်း ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း ဖြစ်နေတယ် ဆိုတဲ့
နောက်ဆုံးတော့ ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း က ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း ပါပဲ ဗျာ…။
သီအိုရီ အဖွဲ့ဝင် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ရောသမမွှေ သားစိုး တစ်ယောက် ဒီနှစ်သင်္ကြန်အတွက်
အာလူသာကူနှာဗူးဂန်ဒူး စီးရီးသစ်ကို ဖြန့်ချိပေးသွားမှာပါတဲ့…။
ဒါရိုက်တာ လုပ်လာတဲ့ သားညီ က ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်းမှာ
ရုပ်ရှင်ကားကြီး ၂ ကား ရိုက်ကူးမယ်ရယ်လို့ ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားလာပါတယ်…။
လူလွတ်တစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့ အကယ်ဒမီ မြတ်ကေသီအောင် က
ဒါဒါ (စိုးမြတ်နန္ဒာ) ကတော့ ကံအကောင်းဆုံးပါ…၊
အဆိုတော် သီရိဂျေမောင်မောင် တစ်ယောက် CB Bank မှာ အလုပ်ဝင်နေပါပြီတဲ့…။
သည်ကလေးမ လေး ရဲ့ အနုပညာ ကို နှမြောတယ်ဗျာ…။
ကိုတင့်တို့ စူပါရပ်ကွက် ရုပ်ရှင်နဲ့ ဒါရိုက်တာ ကျော်ဇောလင်း တစ်ယောက်
အကယ်ဒမီ ဆွတ်ခူးနိုင်ခြေရှိကြောင်း အကယ်ဒမီ ရဲအောင်က ဟောကိန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်ဗျာ…။
ဒါရိုက်တာမောင်မျိုးမင်း ရိုက်ကူးပြီး ပြေတီဦး၊ လိုင်လာခန်း၊ မြင့်မြတ်တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မယ့်
ရာဇ၀င်ရိုင်းသူများ ဇာတ်ကားဟာ မြင့်မြတ်အတွက် အကယ်ဒမီ သေချာစေမယ့် ရုပ်ရှင်ရယ်လို့
ပြေတီဦးကိုယ်တိုင်က မြင့်မြတ် အကယ်ဒမီ အတွက် မှန်းရိုက် တဲ့ သဘောပြောသွားတာကြောင့်
ပြောသလို ဖြစ်မဖြစ် စောင့်ကြည့်ကြရအောင်ပါ…။
မြန်မာ အကယ်ဒမီ က ချိန်ပစ်ရင်လည်း ထိတတ်တယ်လား…ဟင်…။
သင်ဇာဝင့်ကျော် တစ်ယောက် သည်သင်္ကြန်မှာ မိသားစုနဲ့ ဗုဒ္ဓဂယာ သွားမလို့တဲ့…။
အရွယ်လေးရလာတော့ ဘာသာရေးဘက်လှည့်တယ် ထင်ပါရဲ့…။
မကြာမီကမှ မြန်မာပြည်ကို ပြန်လည်ရောက်ရှိနေတဲ့
တေးသံရှင်မွန်းအောင်ရဲ့ တစ်ကိုယ်တော်ရှိုး ကို
ရန်ကုန်ရော မန္တလေးမှာပါ ပြုလုပ်သွားမယ် လို့ သတင်းရရှိပါတယ်…။
ရှိုးအမည်ကို ၀တ်မှုန်ကူးတဲ့…ည လို့ အမည်ပေးထားပါတယ်တဲ့…။
အဲဒီပွဲမှာ အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲ ငါတို့ နွှဲရမည် ဆိုတဲ့ ကိုငှက် ရေးတဲ့ သီချင်းကို ထည့်သွင်းသီဆိုမှာလားဆိုတာကို
မွန်းအောင်ပရိသတ် တွေက အရမ်းအရမ်းကို စိတ်ဝင်စား နေကြတယ်ဆိုလား…။
naywoon ni says: ကွမ်​ဒုံ ရက်​​လေးဆယ်​ က မုံရွာက သတင်း​ထောက်​ ဖမ်းသွားပါ​ရောလား ။ ကြည့်​​ပြော ။ သူ့ကိုဖမ်းထားတဲ့ အချိန်​ ဖွဘုတ်​အ​ကောင့်​ ပွင့်​ အွန်​လိုင်းဖြစ်​​နေပြီး စ​တေးတပ်​ ​တွေတက်​​နေလို့ ဆဲ သံ​တွေ အဲ့ညက မိုးမွန်​​နေတာပဲ ။ ​နောက်​​နေ့ ပြန်​လွတ်​လာတယ်​​ပြောတာပဲ ။
ဖုံးနဲ့ စာရိုက်​ရတာ လက်​​ညောင်းလာပြီဗျာ ဒီ​နေ့ နားဦးမယ်​ ။ မနက်​မှ ဆက်​မန့်​မယ်​ ။
black chaw says: @ naywoonni ;
ဖုံးနဲ့ ဆိုတော့ ညောင်းမှာ ခင်ဗျ…။
Foreign Resident says: ၁ ။
” နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးကို ချစ်ပြလိုက်ကြပါစို့ ”
ဟဲ ဟဲ ၊ ရောထွေးကုန်မှာ စိုးလို့ပါ ။
့နိုင်ငံ နဲ့ လူမျိုးကို ချစ်တယ် ဆိုတာ ။ စစ်တပ်ကို ချစ်တာနှင့် ဘာမှ မဆိုင်ဘူးနော် ။
စစ်တပ်ကို မုန်းနေလျက်နှင့်လဲ ၊ နိုင်ငံ နဲ့ လူမျိုးကို ချစ်လို့ရတယ် ဆိုတာလေး ။
” ၂၀၁၆ မှာ ရုပ်ရှင်လောက ကျဆင်းသွားနိုင်တယ် ”
သင်္ဘောမှာ မြန်မာ VCD ခွေတွေ အများကြီဘဲ ( ကားအသစ်တွေနော် ) ၊
ညနေပိုင်း အလုပ်နားချိန် ဆို မြန်မာ VCD ခွေတွေ စုကြည့်ကြသပေါ့ ။
ကျနော် လဲ ပျင်းနေရင်တော့ တစ်ခါတစ်လေ ဝင်ကြည့်တတ်ပါတယ် ။
ကျနော်ဗျာ မြန်မာ VCD ရုပ်ရှင်တွေကို နာရီဝက်ထက် ပိုကြည့်လို့ကို မရတော့ဘူး ။
ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲတော့ ၊ မပြောတတ်ပါဘူးဗျာ ။
” နီနီခင်ဇော် ဟာ မိန်းကလေး အဆိုရှင်တွေထဲ ဆိုကြေးအမြင့်ဆုံး ”
စကား မစပ် ပါ ။ ကျနော် တခါတလေ သူငယ်ချင်းတွေနှင့် KTV ပါသွားတဲ့အခါ ။
သူငယ်ချင်းတွေက အတင်း သီချင်း ဆိုခိုင်းတဲ့ အခါ ၊
” ငါက ကမ္ဘာမကျေ သီချင်း နှင့် နီနီခင်ဇော် ရဲ့ အမေစုပုံတွေ နှင့် ရိုက်ထားတဲ့ ၊
့မျှော်လင့်ချက် တစ်စုံတစ်ရာ ဆိုတဲ့ သီချင်း ၂ ပုဒ်ဘဲ ဆိုတတ်တာကွ ၊
အဲ့ဒီ့ အခွေ ရွေးလိုက်လေ ” ဆိုရင် ပွဲပြတ်သွားတော့တာဘဲ ။ ဟီ ဟိ ။
ဟုတ်ကဲ့ ပါ ခင်ဗျာ…။
စစ်တပ်ကို မုန်းနေလျက်နဲ့လည်း နိုင်ငံနဲ့ လူမျိုးကို ချစ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်…။
မရောထွေးသင့်သော ကိစ္စတစ်ခုအနေနဲ့ မှတ်သားထားလိုက်ပါ့မယ်ခင်ဗျ…။
အဘဖေါ အနေနဲ့ မြန်မာ ရုပ်ရှင်တွေကို နာရီဝက်ထက်ပိုကြည့်လို့ မရဘူးပေါ့နော်…။
နိုင်ငံခြားကားတွေ အကြည့်များသွားလို့လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ…။
အော်…အဘဖေါ လည်း KTV တွေ ဘာတွေ သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်…။
အဘဖေါ အသံနဲ့ နီနီခင်ဇော် သီချင်းကို နားထောင်ခွင့်ရချင်ပါသေးတယ်ခင်ဗျ…။
အခုလို ကွန်းမန့်လေး ချီးမြှင့်ပေးသွားတာကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ…။
ဦးကျောက်ခဲ says: တိန် … “သီရိဂျေမောင်မောင် တစ်ယောက် CB Bank မှာ…” …
အသက်အရွယ် မတိမ်းမယိမ်းတွေမို့ စပ်စုကြည့်တာပါ…
ဟုတ်ကဲ့ပါ ခင်ဗျာ…။ ဒီတစ်ခါအလှည့်ကျလာတာကတော့
သတင်းတွေ အများကြီးရေးထားတဲ့ အထဲကမှပေါ့နော်…
သီရိဂျေမောင်မောင် သတင်းကိုမှ စိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့နော်…။
သီရိဂျေမောင်မောင် နဲ့ ဒီတစ်ခါတွေ့ရင် မေးထားလိုက်ပါ့မယ်ခင်ဗျ…။
ဘာရာထူးနဲ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသလဲ ပေါ့နော်…။
အော်…သီရိဂျေမောင်မောင် နဲ့ ဦးကျောက်ခဲနဲ့က အသက်အရွယ်ချင်း
မတိမ်းမယိမ်း တွေ လားခင်ဗျ…။
ဒါဆို သီရိဂျေမောင်မောင် တောင် ၄၀ ကျော်လောက်ရှိနေပြီပေါ့နော်…။
ကွန်းမန့်လေး ၀င်ရေးသွားတာကျေးဇူးပါ ဦးကျောက်ခဲရေ…။
ဦးကြောင်ကြီး says: အဲဒီ အဆိုဒေါ်မဂျီးဆို အနော့် အမ်တီအရွယ်လောက်ရှိမဲ.. သူ့တူမ လိုခြင်လိုက်ထှာ..
တောင်ပေါ်သား says: မေမြတ်နိူးလေးက အစ္စဏီနဲ့ ?
သြော်ကွယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
တောင်ပေါ်သားအနေနဲ့ ကွန်းမန့်လေး ၀င်ရေးပေးသွားတာအတွက်
Alinsett@Maung Thura says: သားစိုးက သီးချင်းမဆိုတော့ဘူး..စီးပွါးရေးပဲ လုပ်တော့မယ်ပြောထားပြီး..
စကားမတည်ဘူး … လူဇိုး
ထွက်သမျှ အခွေတွေ အကုန် တစ်ယောက်တည်းဝယ်ပစ်မယ်။
.တစ်ခွေ မကျန် ရောင်းရတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်အောင်…
သူ့အခွေ ထွက်လာမှာ.. သူလုပ်ပြမှာတွေကို မကြည့်ချင်လောက်အောင် ဖြစ်နေတဲ့သူတွေ…
သူ ထွက်သမျှ အခွေတွေ သိမ်းကြုံးဝယ်မယ့် ကျနော့်ကို ငွေစိုက်ပေးကြပါ။
တစ်ယောက် တစ်ခွေနှုန်းစာဖြစ်ဖြစ်… ကျနော်ကတော့ ..ဖွေးဖွေးမှ မရရင်…ဒေါ်ဖွားမေနဲ့ တူတဲ့ ဖြူဖြူကျော်သိန်းကို စိတ်ကူးမှာဗျ…
အခုတော့ သူမရဲ့ ဒီသီချင်းလေး ပြန်ကြည့်/ နားထောင်နေတယ်..
ဒီသီချင်း ရိုက်ကူးပြထားတဲ့ နောက်ဆုံးအခန်းက ယုံချင်စရာကြီးးးး အဟိ
ခင်ဇော် says: ဖြူဖြူ ဒီ လောက်ပိန်အောင် ဘိုလုပ်လိုက်လဲ မသိ??
မွသဲ ( 17082011 ) says: ဒါဒါလေးက စိုးသူနဲ့ဘာပုလိုက်ပီဆိုလား မှန်သလားကျောင်းဒဂါဂျီးရေ။ ဖြူဖြူကျောင်သိမ်းက ဒီအခွေနားမထောင်မိရင်အသေဖြောင့်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အခွေများလား ဖျားဖျား
Alinsett@Maung Thura says: ဖြူဖြူလေး ပြောတာကို ယုံလိုက်စမ်းဘာာာာဆို… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14410
kai says: စိုးသူတို့အတွဲ..ယူအက်စ်ရောက်နေတဲ့သတင်းကို..သေသေချာချာ ဖော်ပြပေးနိုင်ရင်ကောင်းမယ်..။
ညီမလေး မွသဲ ရဲ့ ကွန်းမန့်ကို ကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ…။
အမှန်ကတော့ စိုးသူ နဲ့ စိုးမြတ်နန္ဒာ တို့ သတင်းက
နားစွန်နားဖျားရပ်ကွက်ထဲ ပြန့်နှန့်နေတာ အတော်ကြာနေခဲ့ပါပြီခင်ဗျ…။
ကာယကံရှင်တွေက တရားဝင် ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားခြင်းလည်း မရှိသေးပါဘူးခင်ဗျ…။
ဒါပေမယ့် တဖြေးဖြေးနဲ့တော့ ရုပ်လုံးပေါ်လာပါပြီခင်ဗျ။
ကျွန်တော်ကလည်း ကျင့်ဝတ်အရ ရေးလို့ ရသလောက်ထဲက ရေးလိုက်ရတာဆိုတော့
အမေရိကားဆိုတော့ သူကြီး အပိုင် ပဲ…။
ဓါတ်ပုံနှင့်တကွ တင်ပြလိုက်စမ်းဗာ သူကြီးရာ…။
ဟုတ်ပါတယ် မွသဲ ရေ…။
ဖြူဖြူကျော်သိန်းရဲ့ နာမည်ကျန်နေရစ်မယ် စီးရီးက ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်တွေပါခင်ဗျ…။
ကာယကံရှင်တွေက တရားဝင် ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားခြင်းမရှိသေးတဲ့အတွက်.. ဒါဒါဆီမှာလည်း.. အင်တာဗျူုးမေးခွန်းလေးတွေက.. ဒီအတိုင်းပါသွားလေရဲ့..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1163
hmee says: ဒါဒါတို့ သတင်း​တော့ စိတ်​ဝင်​စားပါသည်​။ ဘာ​တွေများ ဖြစ်​​နေပါလိမ့်​။ သဂျီး စကားသံ ဖမ်းရတာ ဟုတ်​​လောက်​တယ်​။ Was this answer helpful?LikeDislike 3919
weiwei says: နားစွန်​နားဖျား​တွေကို အမြဲ အား​ပေးပါတယ်​။ ဂျာနယ်​၀ယ်​စရာမလိုလို့။
နားစွန်နားဖျားတွေကို အမြဲအားပေးပါတယ် ဆိုတာနဲ့တင်
မဝေ ရဲ့ ကွန်းမန့်က BC နဲ့ ထိုက်တန်နေပါပြီဗျာ…။
pooch says: ဖြူဖြုသီချင်းက ဒီတခါ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်လား
နီနီခင်ဇော်ရဲ့ ဂယ်ဘဲက နားမထောင်ရသေးဘူး
ကျန်တာကတော့ သိပ်စိတ်မ၀င်စားလို့ မဝေဖန်တော့ဘူး
မင်းမော်ကွန်းတို့ ပြန်တောင်းပန်တာတော့ ကောင်းပါတယ်
တခုခုဆို အခြေနေ အချိန်အခါကို ကြည့်ပြီး စကားကို လက်လွတ်စပယ် ပြောတတ်တဲ့ သူတွေ ဆင်ခြင်ရတာပေါ့
တောင်းပန်တတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်ထွန်းကားလာတာပေါ့ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ စည်းလွတ်ဝါးလွတ်ပြောလို့ ဆိုလို့ရတာမဟုတ်ပဲ စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ ဘောင်ထဲက တပါးသူထိခိုက်အောင် ပြောလို့ မရဘူး ဆိုတော တဖြည်းဖြည်းတော့ သဘောပေါက်လာကြတယ် ထင်တာပဲ ( အထင် ) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
ဟုတ်ကဲ့ပါ မပုခ်ျ ရေ…။
စိတ်မ၀င်စားတာတွေ ဘေးဖယ်ပြီး စိတ်ဝင်စားတာလေးတွေ
ဖြူဖြူ့ကျော်သိန်း နောက်ထွက်မယ့် စီးရီးက ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်တွေပါခင်ဗျာ…။
နီနီခင်ဇော်ရဲ့ ဂယ်ဘဲ ဂယ်ဘဲ ကိုလည်း နားထောင်ကြည့်လိုက်ပါဦးခင်ဗျ…။
မြန်မာပြည် ဂီတလောကကို ဆရာဝန်များကြီးစိုးတော့မည်လော လို့ပဲ
လက်ရှိ ဒိတ်ဒိတ်ကျဲ အမျိုးသမီးအဆိုတော် စာရင်းဝင် ၃ ယောက်ဟာ
ဒေါက်တာ ဖြူဖြူကျော်သိန်း၊ ဒေါက်တာနီနီခင်ဇော်၊ ဒေါက်တာ ချစ်သုဝေ…။
ဒီမိုကရေစီ ဆုံးမစာလေးပါ ထည့်ရေးပေးသွားတဲ့ အတွက်
မပုခ်ျကို ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ…။
Mike says: .နားစွန်နားဖျားဂျီးပြောပြတော့လည်း အနုပညာ ဇတ်စုံသိရသပေါ့
.ကျုပ်လည်း ဘိရုမာဇတ်ကားတွေ ကျိမရဘု Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
မိုက်(ခ်) ကို ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်ခင်ဗျာ…။
အော် မိုက်(ခ်) ကလည်း မြန်မာဇာတ်ကားတွေကို ကြည့်မရဘူးပေါ့နော်…။
ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ…။
ကိုရင်စည်သူ says: ၀တ်မှုန်ချွေရွီ ရင့်ကျက်သွားအောင် လုပ်ပေးတဲ့လူတွေထဲ
ကျော်လည်း ပါတယ်လို့.. အဲ့လာလေး.. ကြော်ငြာလာထိုးတာပါ။ အဘတို့… :D
၀တ်မှုံရွှေရည် ကို ရင့်ကျက်စေသူများ ဆိုတဲ့
ကိုရင်စည်သူ ကို ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ…။
ဦးဦးပါလေရာ says: .ကိုင်​ဇာကို ဒါထက်​ ၂ နှစ်​ငယ်​မယ်​လို့ ထင်​ထားတာဗျ…
.သားညီ ကားကြီးရိုက်​မယ်​ဆို​တာ​တော့ စိတ်​ဝင်​စားမိပါတယ်​..
black chaw says: @ ဦးဦး ပါလေရာ ;
ကိုပါကြီးကလည်း ကိုဖေါရိန်းလိုပဲ KTV သွားလေ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း
ကွန်းမန့်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါ ကိုပါကြီးရေ…။
လုံမလေးမွန်မွန် says: အရမ်းအမြင်ကတ်ပြီးမှ အရမ်းကြိုက်သွားတဲ့ အဆိုတော်တွေထဲမယ်.. နီနီခင်ဇော်က ထိပ်ဆုံးကပဲ…
နီနီခင်ဇော် ပြီးရင် ဒီဒီးကို အကြိုက်ဆုံး…
ဂယ်ဘဲ ဂယ်ဘဲ ကို MMA ဆုပေးပွဲမှာ နားထောင်လိုက်ရတယ်… သူ့ပုံနဲ့ ဆိုဟန်နဲ့ သီချင်းနဲ့ကတော့ လိုက်ပါ့… သူ့ performance ကိုကြည့်ရင် ရင်တုန်ပန်းတုန်ရှိတာလေး တစ်ခုပါပဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
black chaw says: @ လုံမလေး မွန်မွန် ;
အရမ်းအမြင်ကတ်ပြီးမှ ကြိုက်သွားတဲ့ အဆိုတော်တွေထဲမယ် နီနီခင်ဇော်က
ထိပ်ဆုံးက ပဲ ဆိုတော့ နောက်ထပ်လည်း ရှိဦးမယ်ပေါ့နော်…။
အော်…သူ့ performance ကိုကြည့်ရင် ရင်တုန်ပန်းတုန် ရှိတယ်ဆိုတာကလေ
မွန်မွန် က ဖြစ်တာလား
မွန်မွန့် ချစ်သူက ဖြစ်တာလား ဟင်င်င်…။
naywoon ni says: ဟိုတစ်​ရက်​က မန်း​လေးရှိုးပွဲ မှာ မွန်း​အောင်​က ၃၅ ပုဒ်​​တောင်​ ဆက်​တိုက်​ဆိုသွားတယ်​ဆိုပဲ ။
အချစ်​၏ လက်​များနဲ့ အချစ်​၏ လက်​များနဲ့ ကမ္ဘာကို ထုဆစ်​ခဲ့
ခင်ဇော် says: သများ ပြောချင်တဲ့ အချက်ကို ဘဖော ပြောသွားပြီမို့ မပြောတော့ဘူးးး
ခင်ဇော် ကလည်း ဘဖေါ ပြောသွားသလိုပါပဲ တဲ့ ခင်ဗျာ…။
အခုလို ကွန်းမန့်လေး ၀င်ရေးပေးတာကိုပဲ
ဦးကြောင်ကြီး says: ခင်ဝင့်ဝါ သဒင်းလေးလဲ လုပ်ပါဦး.. ညှီလေကောင်းလေ
apolo11 says: မွန်းအောင်က ရန်ကုန်မှာ မတ်လ ၁၀ ရက်နေ့ည ဆိုမယ်။
PK ကုလားကား ကိုကြည့်ပြီး မြန်မာရုပ်ရှင်တွေကိုလည်း
အဲ့ဒီလို အတွေးအခေါ်တွေပါတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေ ဖန်တီးစေချင်တယ်။
kai says: မနေ့ညကတင်.. မြန်မာပြည်ကလာတဲ့.. ဒါရိုက်တာတယောက်နဲ့.. လေကန်ဝေဖန်ရေးစကားပြောဖြစ်တာမှာ…
မြန်မာတွေ.. ဆင်ဆာလည်းချောင်ရော… အနုပညာသက်.. အတွေးအခေါ်မြင့်.. နိုင်ငံရေးနွယ်… စတဲ့ဇတ်လမ်းကောင်း…ကားကောင်းတွေမရိုက်.. အိပ်ယာပေါ်ချည်းဆွဲတင်တဲ့ကားတွေနဲ့.. သရဲကားတွေရိုက်နေတော့တာတဲ့..။
ဘာဖြစ်လို့.. တခြားလူမျိုးတွေနဲ့မတူ.. အဲလိုဖြစ်တာလည်းတွေးမိတာမှာ…
ငရဲ..သရဲနဲ့ခြောက်.. ဘုံနဲ့မြောက်ပြီးမှ. စားကြ(ရ)သူများဟာ… လူပြိုကြီးများအများစု.. အလုပ်မရှိ.. အားရင်ဗီဒီယိုတီဗီကြည့်သူပရိတ်သတ်ကြီးသာဖြစ်တဲ့အကြောင်း… ပြောရင်းနဲ့.. ထိထိရောက်ရောက်ဆက်စပ်ရေးပြရရင်..အကုန်စိတ်ပိန်ကုန်မှာဖြစ်သမို့.. ထားလိုက်တော့မယ်..။
(ဇီဇီမမြင်စေရ) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
စိုးသူ တို့ သတင်းကို
ပြီးတော့ စိုးမြတ်နန္ဒာတို့ အပိုင် ဂျာနယ်လို့ ပြောလို့ရတဲ့
နံနက်ခင်း ကတောင် မရေးဘူးခင်ဗျ…။
တခြား အနုပညာရှင်တွေရဲ့ သတင်းတွေဆိုရင်
လက်ရဲဇက်ရဲ ရေးရဲကြတဲ့ ဂျာနယ်တွေဟာ
စိုးသူ သတင်းကို တော့
အဲဒါ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတာ ကျွန်တော် ဆက်စဉ်းစားမိတဲ့အခါ
အဖြေတစ်ခု ရေးရေးလေး တွေးမိပါတယ်…။
အတွေးဆိုတော့ အတွေးထဲမှာပဲ ထားတာအကောင်းဆုံးမို့
အဲဒီအပေါ် သူကြီးရဲ့ အမြင်လေး သိပါရစေခင်ဗျာ…။
နားစွန်နားဖျားမှာလည်း ဒီ ကိစ္စ ရအောင် ဆွဲတယ်။
black chaw says: @ apolo 11 ;
ဟုတ်ကဲ့ပါ apolo 11 ခင်ဗျား…။
မွန်းအောင် ရှိုးသတင်းလေး ၀င်အားဖြည့်ပေးတာ ကျေးဇူးပါခင်ဗျ…။
ကျေးဇူး အထူး…အထူး ပါ ခင်ဗျာ…။
မြစပဲရိုး says: ကိုချော
အဲဒီ ဖော်ချွတ်မော်ဒယ်မလေး နဲ့ အင်တာဗျူး ကို ဧရာဝတီ မှာ ဖတ်လိုက်ရတယ်။
(အခု ပြန်ရှာတာ မတွေ့တော့ဘူး)
မှန်တာပြောရရင် သူ့စကားတစ်ချို့ ကို ကြားပြီး လေးစား တောင်သွားတယ်။
“ဆက်စီမော်ဒယ်လည်း နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးကို ချစ်တာပဲ” ဆိုပြီး ပြောတာကို မဟုတ်ပါဘူး။
သူ့ဘဝ ရဲ့ ပလန် လုပ်နေပုံလေး ကို သဘောကျလို့။
မှတ်မိ သလောက် ကတော့ ငယ်တုန်းမှာ ဒီလို လုပ်ပြီး ကြီးတဲ့ အချိန် ပညာ နဲ့ အသုံးချ ချင်တယ် ဆိုလား။
သူက ဥပဒေ နဲ့ ကျောင်းပြီး ထားတာ။
အဲလို လုပ်ဖို့ ကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ တိုက်တွန်းပါတယ်။
တစ်နေ့မှာ အင်မတန် တော်တဲ့ ဥပဒေ ပညာရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်ပါစေလို့ လဲ ဆုတောင်းပါတယ်။
Ma Ma says: မလတ်ရေ
သူ့ဘ၀ကို ပလန်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ အားပေးထောက်ခံချင်ပါတယ်။
အမှန်တကယ် အကောင်အထည်ပေါ်အောင် ကြိုးစားဖို့တော့ လိုသေးတယ်။
ဇာဇာထက် က ဖြတ်လမ်းနည်းနဲ့ လူသိအောင်လုပ်တာရယ်လို့
အခု သူလိုချင်တဲ့ လူသိတဲ့ အဆင့်ကို ရသွားပြီမို့
ဖေါ်တာချွတ်တာတွေ ရိုက်တာကို လျှော့ချသွားပါတော့မယ်တဲ့…။
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: စဂါးမစပ်​ ဂျာဂျာထက်​ ဆိုတာ ဒူတုန်းဟင်​င်​
ဦးကြောင်ကြီး says: ဂျာဂျာထက်ကို
ဒါဒါတို့ သတင်းကတော့ ဟုတ်လို့ပေါ်တယ်လို့ပဲ
Crystalline says: အူးဘက်ထုံးစံအတိုင်း…သတင်းတွေက စုံပလုံတုံနေရော… ဂျာနယ်ဖိုးမတတ်နိုင်သူမို့… ကျေးဇူးပါ.. ဇာလျန်းဆိုတာ။ရေးတာတွေ..မကြားဖူးသလိုပဲ.. အခုတလော တေးရေး ဆရာညီညီသွင်သီချင်းလေးတွေ… တော်တော်လေး သဘောကျနေတယ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
ဇာလျန်းဆိုတာ နှယ်နှယ်ရရ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး မဟုတ်ပါဘူးကွယ်…။
ညီညီသွင် ကို တော်တော်လေး သဘောကျတယ်ပေါ့နော်…။
ညီညီသွင် က ကိုင်ဇာ ခေတ်ကတည်းကစခဲ့ပြီး
စိုးလွင်လွင် ခေတ်ကို ဖြတ်သန်းခဲ့…။
ထူးအိမ်သင် ခေတ်ကိုလည်း ဖြတ်သန်းခဲ့…။
အခုအထိလည်း သီချင်းတွေ ရေးနေတုန်း သီချင်းရေးဆရာကောင်းတစ်ယောက်ပါကွယ်…။
စိုးလွင်လွင် ရဲ့ စိုးစိတ်တိုးတိတ်လွမ်းချိန်၊ စိတ်ဖြေသီချင်း
၂ ပုဒ်တည်းနဲ့တင် ညီညီသွင် ဆိုတာ ဒါပဲလို့
ပြောလို့ ရတဲ့ တေးရေးဆရာပါခင်ဗျ…။
Mr. MarGa says: နားစွန်​နားဖျား ပဲ ​ကောင်းတယ်​
ဒါ​တောင်​ တခါတခါ နားစွန်​နားဖျား ထဲ စိတ်​ပိန်​စရာ​တွေ ပါလာတတ်​​သေး
ခုလည်း ဆင်​ဆာကိုပြန်​​တွေးရင်း စိတ်​ပိန်​​ချင်​ချင်​
ငါဟဲ့ ကွန်​ဆာေ​ဗးတစ်​ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကွန်ဆာဗေးတစ်လို့ တံဆိပ်ကပ် သွားတယ်ပေါ့။
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: ​ရုပ်​ရှင်​နဲ့ ဂီတ အ​ကြောင်း​တွေ မ​တွေးအား​သေးပါဗျာ
အကြည်​ဒတ်​ခမ်းတာတ​ကြောင်းနဲ့ ​ပိုက်​ဆံအိတ်​ခမ်းတာ​ရော​ကြောင့်​ ဆိုပါ​တော့
​ဘောပွဲ​တောင်​ နပ်​မမှန်​ဘူးရယ်​ သည်​ရက်​ပိုင်း
ကိုဇာလျန်း အ​ကြောင်း​တော့ စိတ်​၀င်​စားမိငဲ့
(သည်​စာ​တွေကို သင်္ချာ နီနီ နဲ့ မှုန်​ကြီး မမြင်​ဇီယ)
တစ်ခါတစ်လေ ဒီလိုပဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ် ကွယ်…။
ကိုဇာလျန်း ကိုတော့ မင်း စိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ်ဆိုတာ
ကိုဇာလျန်းအကြောင်း မှတ်သားထားတာလေးတွေ ရှိရင်